Archive du 13-janv-2022
Fotoan-dehibe ho an’ny FJKM Eny amin’ny Coliseum ny alahady izao
Ho ambohipihaonan’ny mpino FJKM indray ny alahady 16 janoary 2022 izao. Toy ny fanaony isan-taona mantsy, dia hotanterahina amin’io alahady io etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana lehibe ataon’ny mpino FJKM.
SEZANA MPITANDRINA IRAY Nisy nametraka karan-doha sy vovo-paty
Nahitana trangan-javatra hafahafa tamina fiangonana FJKM iray teto an-drenivohitra. Nisy nametraka karan-doha sy vovo-paty nifono lamba mantsy teo amin’ny sezan’ny mpitandrina.
Fisolokiana avo lenta Biriky no amidiny lazainy fa finday
Lehilahy iray 44 taona no nosamborin’ny Polisy miasa teny amin’ny Fasan-karana ny 11 janoary 2022 teo noho ny resaka fisolokiana olona.
Fanamiana nanamarika ny 12 janoary Andrasana ny fanamarinana sy fanazavan’ny Filoha
Ny 12 Janoary dia andron'ny manamboninahitry ny tafika Malagasy. Toy ny isan-taona dia nanamarika izany tamin'ny fiarahana tamin'ireo miaramila eo amin'ny rezimantan'ny vondrona mpiambina ny fiadidian'ny Repoblika ny tenako,
Orinasa Telma 73 tapitrisa USD no narotsaka tamin’ny fotodrafitrasa
Araka ny fanadihadiana nataon’ny vovonana mpanadihady, Speedchecker, dia ny orinasam-pifandraisan-davitra, Telma, hatreto no mahasahana izay lafin’ny fifandraisan-davitra sy ny tontolony izay indrindra eto Madagasikara,
SAMPATI FJKM Hanao famaritana ny soritr’asa 2022
Hiatrika komity foibe ny sampana mpanazava sy tily eo anivon’ny fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara anio sy rahampitso zoma 14 janoary,
Séraphin Randriamanantena, mpitandrina “Ny fanabeazana no fanalahidin’ny fampandrosoana”
Misy teboka miisa 3 ny tanjona amin’ny fanabeazana skoto, hoy ny sekretera jeneralin’ny SAMPATI FJKM, Séraphin Randriamanantena, mpitandrina. Ny ho vavolombelon’I Kristy,
Làlanna miakatra an’Ambohidratrimo Nampiteny ny moana ny toham-boivoy
Nampiteny ny moana, hoy ny fitenenana izay, ny fitohanan’ny fifamoivoizana niakatra an'Ambohidratrimo hatrany aloha kelin'i Talatamaty iny ny tolakandron’ny omaly izay.
Mamita fotoam-piasana sisa…
Mamita fe-potoana iasana sisa, fa raha izay fahagagana heverina fa hataon’ity Fanjakana ity momba ny fandrosoan’ny firenena toa ho lavitry ny kitay ny afo